DATY SADY FANASANA – FJKM
DATY SADY FANASANA
1-Alahady 06 Janoary 2019 :
Fifamindram-pahefana avy amin’ny Filohan’ny FLM ho an’ny Filohan’ny FJKM amin’ny fitantanana ny Fiombonan’ny Fiangonana Protestanta eto Madagasikara (FFPM) amin’ity taona 2019 ity . Izany dia hatao ny ny Alahady 06 Janoary 2019 , amin’ny 3ora ,ao amin’ny FJKM Atsimon’Imahamasina . Hisy koa ny fanolorana sy fiarahabana ny Tonia sy Mpandraharaha vaovao eo anivon’ny FFPM .
2-Talata 08 Janoary 2019 :
Fanompoampivavahana iombonan’ny mpiasan’ny FOIBE FJKM ny Talata 08 Janoary 2019, manomboka amin’ny 8 ora sy sasany izay hatao eny amin’ny FJKM ANDRAINARIVO FAHASOAVANA .Hisy ny fanolorana mariboninahitra MEDAILLE DE TRAVAIL ho an’ny mpiasan’ny FOIBE .Hatao mandritra izany fotoana izany koa ny fiarahabana ireo Ray amandreny : Filohan’ny FJKM, Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe , ny Mpanatanteraka .
3-Alakamisy 10 Janoary 2019 :
Fanompoampivavahana ho fitokanana ny RADIO FAHAZAVANA AMBATOLAMPY, izay hatao ny Alakamisy 10 Janoary 2019 ,manomboka amin’ny 9ora sy sasany , ao amin’ny FJKM ANTAMPOTANANA Ambatolampy , izay hanasana mpianakavin’ny finoana rehetra .
Radio Fahazavana .
ARORIAKA sy Fihaonambe
Sekoly 200T / Antsampanahy
ARM / Diakona sy Loholona
Alahadin’ny SVM 2019
FJKM /ARM -188 taona …